जेनिफर चढेको विमान एकाएक दुर्घटनाबाट बच्यो! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > जेनिफर चढेको विमान एकाएक दुर्घटनाबाट बच्यो!
लसएञ्जल्स(अमर उजाला)– ‘एक्सन वुमन’का रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएकी हलिउड अभिनेत्री जेनिफर लरेन्सले आफ्नो जिन्दगीसँग जोडिएको एक घटनाको खुलासा गरेकी छन् ।
जुन घटना सुन्दा जोकोही त्रसित हुन्छन् । उनका अनुसार जेनिफर एक निजी विमानमा यात्रा गर्दा निकै भयभित भई मृत्युको मुखमा पुगेको अनुभव गरेकी थिइन् । यो घटना सन् २०१७ को हो । जब उनी आफ्नो घर लुइसविलेबाट निजी विमानमा न्यूयोर्क गईरहेकी थिइन् । यही समयमा उनको विमानभित्र एक ठूलो आवाज आएको थियो । उनलाई पाइलटलाई के भएको भनी बुझ्दा पाइलटले विमानको पहिलो इञ्जिन फेल भएको जानकारी दिए ।
जसकारण जेनिफर निकै डराइन् । ‘मलाई लाग्यो कि विमानमा रहेका सबै मर्दैछौं । मलाई आफू बसेको सिटमा केवल कंकाल मात्र रहेको अनुभव भइसकेको थियो’, उनले भनेकी छन् । जेनिफरले पाइलटले विमानको अवस्था बताएपछि आफूले परिवार सम्झिएको स्मरण गरिन् । विमानमा उनका साथ दुई भाई र एक डाक्टर पनि थिए । त्यसपछि पाइलटले विमानलाई नियागरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराएका थिए ।
‘यसपछि विमान शान्त भयो । सबै आवाज बन्द भयो । त्यसपछि दोस्रो इञ्जिन पनि फेल भयो । यसलाई आफैंमा दुलर्भ क्षण मानिएको थियो । म निकै दुःखी थिएँ । किनकी हामी सबै मृत्युको मुखमा पुगिसकेका थियौं’ जेनिफरले स्मरण गरेकी छन् ।
यात्राको क्रममा पिप्पी(उनको कुकुर) जेनिफरकै काखमा थियो । विमानस्थलमा विमानले आकस्मिक अवतरण गर्दा उनले विमानबाट रनवेमा दमकल र एम्बुलेन्स देखेपछि उनले राहतको श्वास फेरेकी थिइन् ।
४१ वर्षका शिक्षकले आफुलाई सम्हाल्न नसक्दा यस्तो जे भयो… (भिडियो सहित)